राजस्व बाँडफाँटमा विवाद- समाचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २०, २०७६ विष्णुलाल बुढा, राजबहादुर शाही
वीरेन्द्रनगर/मुगु/डोल्पा — प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थका साथै यार्चाको राजस्वमा विवाद देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट पाइने लाभको अंश प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहलाई करको दायरा तोकिएको छ। ‘संघीय कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकामा बाहेक प्राकृतिक स्रोतमध्ये आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तरको संकलन शुल्क प्रदेशले लगाउनेछ,’ ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, बालुवा र दहत्तर–बहत्तर संकलन गर्नुअघि प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।’ स्थानीय तहले उठाउँदै आएको मनोरञ्जन कर र जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दहत्तर–बहत्तर कर स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारले उठाउने ऐनमा उल्लेख छ। यसको बाँडफाँट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ६०/४० को अनुपातमा गरिने ऐनमा भनिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत डम्मर अर्यालले ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले राजस्व नबुझाएको बताए। ‘आफू पनि सरकार हो भनेर हो कि? एक रुपैयाँ पनि नबुझाउँदा त अटेर गरेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘यसबाट राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी ऐन उल्लंघन भएको छ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट फागुन मसान्तसम्म ७ करोड ५३ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ। उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा नपठाएको राजस्व उपशाखाकी नासु गीता चपाईंले जानकारी दिइन्। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पनि १२ लाख १५ हजारमा श्रमिक सहकारीलाई राजस्व संकलनको जिम्मा दिएको छ। ‘सहकारीले पहिले नै हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरिसकेको छ,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराबहादुर कुँवरले भने, ‘केही दिनभित्र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बुझाउँछौँ।’ दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले तीन लाख राजस्व संकलन गरेको भए पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छैन। नगरपालिकाका लेखापाल राजेन्द्रप्रसाद रिजालले बिहीबार खातामा पैसा आएको र जेठ मसान्तसम्म राजस्व बुझाउने बताए।
चौकुने गाउँपालिकाले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत राजस्व संकलन गरेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले कसैले ठेक्का नलिएको बताए। उनका अनुसार जोखिमयुक्त ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न दिइएको छैन। ‘सामान्य ठाउँबाट भने आवश्यक परेका व्यक्तिले सित्तैमा उत्खनन गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
५ लाख ७४ हजार राजस्व संकलन गरेको सिम्ता गाउँपालिका पनि ठेकेदारसँगको सम्झौता सकिएपछि मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषमा पठाउने योजनामा छ। बराहताल गाउँपालिकाले करिब ८६ लाख राजस्व संकलन गरेकोमा प्रदेशमा पठाएको छैन। आर्थिक वर्षको अन्तिममा हिसाब गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिने गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व विभाजित कोषमा हुनुपर्ने बताए। ‘सबै स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरेर आफ्नै खातामा राखेका छन्,’ उनले भने, ‘यसो गर्नु कानुनविपरीत हुन जान्छ।’ स्थानीय तहलाई सचेत गराए पनि उनीहरूले अटेर गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गरेर राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो। स्थानीय तहले समयमै नबुझाउँदा ५० करोडको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको छ। स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत उठेको राजस्व बुझाए ३० करोडसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ।
यार्चा संकलनका लागि पाटन जाने व्यक्तिबाट संकलित रकममा स्थानीय तहले पनि दाबी गरेका छन्। अहिले यस्तो रकम शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले एकलौटी लिँदै आएको छ।
निकुञ्जले पाटन प्रवेश गर्नेबाट उनीहरूको जिल्ला तथा क्षेत्र हेरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग विभाजन गरेको छ। ‘क’ वर्गबाट ५ सय रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गबाट २ हजार रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गबाट ३ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ। यस वर्ष बिहीबारसम्म २ करोड २ लाख रुपैयाँ संकलन भएको निकुञ्जले जनाएको छ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख ओमबहादुर बुढाले यसरी संकलन हुने रकमको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए। ‘हामीले विगतदेखि नै राजस्व बाँडफाँट हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर यसबारे संघीय सरकारले निकुञ्जमार्फत एकलौटी रूपमा राजस्व लगिरहेको छ।’
डोल्पाका स्थानीय तहहरू जगदुल्ला, शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध, त्रिपुरासुन्दरी र ठूलीभेरीमा यार्चा पाइन्छ। यी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजस्व माग्दै संघीय सरकारका निकायलाई दबाब नदिएका होइनन्। तर, उनीहरूको माग पूरा भएको छैन। शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका अध्यक्ष टसीतुन्डुप गुरुङले राजस्व बाँडफाँटको माग गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागसम्म पुगे पनि सुनुवाइ नभएको बताए। ‘हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेकै यही हो तर संघीय सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले त स्थानीय तहलाई मात्र होइन, प्रदेश सरकारलाई पनि राजस्वको केही अंश दिनुपर्छ भनेका छौं।’
शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले यार्चा संकलन र किनमेलबापत उठ्ने राजस्व सिधै सरकारको खातामा जाने र त्यहीँबाट वितरण हुने गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा २५ (क) अनुसार राजस्व संकलन गर्ने गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी छत्रबहादुर खडकाले बताए। ‘नीति बन्यो भने राजस्व बाँडफाँटमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो नीति नबनेकाले हामीले राजस्व संकलन गरी सिधै संघीय सरकारको खातामा जम्मा गर्ने गरेका छौं।’
राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने पाटनबाहेकका स्थानमा पनि स्थानीय तहले राजस्व उठाउन सकेका छैनन्। ठूलीभेरी नगरपालिकाको यार्चा पाइने वडा नं. १, २, ५ र ६ तथा काइके गाउँपालिका र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका सबै वडाले आफ्नो क्षेत्रमा यार्चा संकलकबाट प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेका थिए तर हालसम्म उनीहरूले शुल्क उठाउन सकिरहेका छैनन्। डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख नरबहादुर क्षेत्रीले यी क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क कसले संकलन गर्ने भन्नेबार स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताए।
९० लाख गाउँपालिकालाई
मुगुमा गाउँपालिकाले प्रवेश शुल्कबापत राजस्व संकलन गरेको छ। यार्चा संकलनका लागि पाटन जानेबाट आइतबारसम्म ९० लाख ४१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत वर्ष ६१ लाख ९२ हजार संकलन भएको थियो।
आइतबारसम्म जिल्लाभित्रका २ हजार ५३ जना र जिल्लाबाहिरका १ हजार ९ सय ९० जना पाटन गएका छन्। मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास शर्मा रिजालले यार्चा संकलनका लागि पाटन जाने क्रम जारी रहेकाले राजस्व बढ्न सक्ने बताए। जिल्लावासीबाट प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ र जिल्ला बाहिरकालाई २ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ। गत वर्ष यो दर क्रमशः १ हजार ५ सय र २ हजार रुपैयाँ थियो। मुगुका सानो कोइकी, ठूलो कोइकी, रिमार, चाल्ने, च्याकु, टाके, महलेखलगायत क्षेत्रमा यार्चा पाइन्छ।
संकलित रकममध्ये ४० प्रतिशत वडा नं. २ को मुगुगाउँ र डोल्फुगाउँको विकास निर्माणमा खर्चिने र २५ प्रतिशत रसिद छपाइ, औषधि उपचार र युवा क्लबलाई सहयोग गरिने बताइएको छ। बचेको ३५ प्रतिशत रकम मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ९ सम्मको विकास निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धिलगायत शीर्षकमा खर्च गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए। मुगुमा २०६१ सालदेखि यार्चाबाट राजस्व उठाउने गरिएको छ। विगतमा यस्तो प्रवेश शुल्क जिल्ला विकास समिति र वन कार्यालयले उठाउँथे। संघीयतापछि स्थानीय तहले उठाउन सुरु गरेका हुन्।
प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ २०:४२
लन्डन उत्रिए ट्रम्प
बेलायती प्रधानमन्त्री मेसँग पेरिस जलवायु सम्झौता र हुवावेबारे कुराकानी गर्ने
जेष्ठ २०, २०७६ एजेन्सी
लन्डन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तीनदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा सोमबार बेलायतको राजधानी लन्डन उत्रेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रम्पलाई बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले बकिंगम दरबारमा स्वागत गरेकी छन् । ट्रम्प सोमबार नै एलिजाबेथले आयोजना गरेको राजकीय रात्रिभोजमा परिवारसहित सहभागी भए ।
बेलायतको राजकीय भ्रमण गर्ने उनी तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् । एलिजाबेथले आफ्नो शासनकालका १३ मध्ये १२ अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई बकिंगम दरबारमा स्वागत गरिसकेकी छन् । तर राजकीय सम्मान भने यसअघि जर्ज डब्लु बुस र बाराक ओबामालाई मात्र दिइएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा मंगलबार ट्रम्पले बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेसँग भेटवार्ता गर्ने छन् । दुई नेताबीच जलवायु परिवर्तन तथा चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेबारे कुराकानी हुने बताइएको छ ।
सन् २०१७ मा भएको जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका एकपक्षीय रूपमा बाहिरिने ट्रम्पको निर्णयविरुद्ध बेलायत असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री मेले भेटवार्ताका क्रममा उक्त मुद्दा उठाउने बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी, पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीच जारी व्यापार विवादको जड मानिएको चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेबारे समेत दुई नेताबीच कुराकानी हुनेछ । आफ्नो देशको प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले हुवावेलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ । कुनै पनि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेपछि अमेरिकामा व्यापार तथा अन्य सहकार्यका लागि अनुमति आवश्यक पर्छ । त्यसकारण पछिल्लो निर्णयसँगै हुवावेले आगामी दिनमा निर्माण गर्ने मोइबाइलमा गुगल प्लेस्टोर, गुगल सर्च, गुगल म्याप, गुगल क्रोम, युट्युब, जिमेल लगायतका एप्सहरु हुने छैनन् ।
लन्डन मेयरविरुद्ध खनिए
विमान बेलायत उत्रनु केहीबेर अघि ट्रम्पले लन्डन मेयर सदिक खानविरुद्ध ट्वीट गरे । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई बेलायतले रातो कार्पेट विछ्याउन नहुने प्रतिक्रिया दिएपछि कुद्ध ट्रम्प खानविरुद्ध खनिएका हुन् । दुई नेता ट्वीटरमार्फत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने गरेका छन् । यद्यपि, उनलाई बेलायत सरकारले रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेको छ ।
ट्रम्पले ट्वीटमा ‘अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण साझेदार मुलुकको भ्रमणका क्रममा लन्डन मेयर सदिक खानले गरेको व्यवहार मूर्खतापूर्ण रहेको’ बताए । ट्रम्पले भनेका छन्, ‘खानले लन्डनको अपराधबारे चिन्ता लिए पुग्छ, मेरोबारे होइन ।’ खानले आइतबार एक अखबारमा लेख लेख्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सन् १९३० र १९४० को दशकका युरोपेली अधिनायकवादी नेतासँग तुलना गरेका थिए ।
बीबीसीका अनुसार ट्रम्पको विरोधमा मंगलबार बेलायतका मुख्य सहर लन्डन, म्यान्चेस्टर, बेलफास्ट र बर्मिंघममा विशाल विरोध प्रदर्शनीको तयारी गरिएको छ । विपक्षी दलका नेता जेरेमी कोर्बिनले खानको प्रतिरक्षा गर्दै ‘ट्रम्पविरुद्ध बेलायतका मुख्य सहरमा मंगलबार गरिने विरोध प्रदर्शन उनले सदिक खानसहित बेलायत, अमेरिका, र विश्वमा आफ्ना आलोचकमाथिको आक्रमणविरुद्धको ऐक्यबद्धता भएको’ जनाए ।
यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘बेलायतको सत्तारूढ दलको नेता तथा आगामी प्रधानमन्त्रीमा बोरिस जोन्सन उत्तम विकल्प’ भएको भन्दै कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ २०:१८